के तपाईं सेवानिवृत्ति मा स्वास्थ्य सेवा लागत को लागी तयार हुनुहुन्छ? - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी कम्पनी, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार चेकआउट समुदाय औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु औषधि जानकारी मनोरञ्जन कम्पनी, चेकआउट समाचार, कल्याण
मुख्य >> कम्पनी >> के तपाईं सेवानिवृत्ति मा स्वास्थ्य सेवा लागत को लागी तयार हुनुहुन्छ?
सेवानिवृत्ति मा स्वास्थ्य सेवा लागत को लागी बजेट को लागी एक मुश्किल चीज हो। तपाईंले सेवानिवृत्ति स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गर्नुपर्नेछ, प्लसबाट बाहिरको खर्चको लागि योजना बनाउनु पर्नेछ र लागतमा वृद्धिको लागि तयारी गर्नुपर्नेछ यदि तपाईंलाई सहयोगी जीवनको लागि आवश्यक छ भने।
यदि तपाईं सेवानिवृत्त हुनको लागि बचत गर्न थाल्नुभयो जब तपाईं जवान हुनुहुन्थ्यो, त्यो उत्तम छ! तर यदि तपाईंले त्यसो गर्नुभएन भने पनि, त्यहाँ अझै पनि आरामदायी जीवनको लागि मार्ग छ मेडिकल खर्चको साथ सबैले अपेक्षित गर्न सक्ने उमेर hit 65 पछि हिर्काए।
सेवानिवृत्तिमा स्वास्थ्य सेवा लागतहरूको लागि कसरी योजना बनाउने
सेवानिवृत्ति मा स्वास्थ्य सेवा खर्च महँगो हुन सक्छ। भ्यागुअर्ड सेन्टरको एक अध्ययनले भन्छ कि 65 65 वर्षको उमेरमा, औसत आयुमा, केही व्यक्तिले लगभग about २००,००० खर्च गर्न अपेक्षा गर्न सक्दछन् स्वास्थ्य सेवा लागतहरु को लागी। जुन प्रति बर्ष $ ,000००० सम्म टुक्रिन्छ — तर केवल नियमित डाक्टरको भ्रमण र औषधीको लागि खाताहरू हो, शल्य चिकित्सा वा दीर्घकालीन हेरचाह होईन। यदि तपाईंसँग मेडिकेड वा उत्कृष्ट सेवानिवृत्ति स्वास्थ्य सेवा कभरेज छ भने, तपाईंलाई जेबबाट धेरै तिर्नु पर्दैन।
लामो अवधिमा हेरचाह एक अतिरिक्त खर्च हो जुन मेडिकेयरले कभर गर्दैन, र तपाईंले प्रति दिन २०० डलरको लागि बजेटको अपेक्षा गर्नुपर्दछ, थोमस जेफरसन विश्वविद्यालयमा जनसंख्या स्वास्थ्यको बारेमा कक्षा पढाउने ईन्टर्निस्ट र जीरियट्रिशियन रिचार्ड स्टेफानाची भन्छन्।
यद्यपि ती औसत मात्र हुन्। सेवानिवृत्ति मा स्वास्थ्य सेवा लागत प्रत्येक व्यक्ति मा आधारित धेरै फरक हुनेछ। जेनिफर स्टील टेक्सासको वुडल्याण्ड्समा नर्थवेस्टर्न म्युचुअलका सम्पत्ति प्रबन्ध सल्लाहकारले टिप्पणी गरे कि औंलाको राम्रो नियमले तपाईको वार्षिक सेवानिवृत्ति बजेटको लागि 80०% देखि% 85% बीचमा हुनुपर्दछ। यसले रिटायरमेन्टमा सबै लागतहरू, भोजन, आवास, बिदा, र अधिक समावेश गर्दछ। थप रूपमा, तपाई लगभग दुई दशकहरूको स्वास्थ्य सेवा लागतहरूको लागि तयार हुनुपर्दछ। Stefanacci पुराणमतवादी अन्त मा बजेट भन्छन्, र तपाईंलाई आवश्यक छ लाग्छ भन्दा बढी पैसा संग तयार हुन।
स्वास्थ्य बीमा कभरेज सेवानिवृत्त
सेवानिवृत्ति पछि स्वास्थ्य बीमा, वा सेवानिवृत्ति मा तपाइँको स्वास्थ्य बीमा विकल्प को बारे मा जान्न को लागी एक सबसे महत्वपूर्ण कुरा भनेको यो छ कि तपाइँ कामका दुनिया मा हुँदा तपाईको स्वास्थ्य बीमा ठीक ठीक त्यस्तै काम गर्दैन। तपाईंको नियोक्ता-प्रायोजित योजनाले कम कपिमेन्टहरू र कटौतीयोग्यहरू समावेश गर्न सक्दछ, साथै तपाईं अझै पनि एउटा पेचेक प्राप्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मेडिकेयरका लागि, ती कागजातहरू र कटौतीयोग्यताहरू परिवर्तन हुन्छन् कसरी तपाईं आफ्नो मेडिकेयर कभरेज प्राप्त गर्नुहुन्छ र तपाईं भर्ना हुनुभएको छ वा अन्य प्रोग्रामहरू, सुविधाहरू, र बीमाको लागि योग्य हुनुहुन्छ। तर यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि स्वास्थ्य सेवाको लागि मेडिकेयर एक्लैले मात्र विकल्प हुँदैन तपाईले निवृत्त हुनुभयो।
कती मिलीग्राम एडविल लिन सक्छु?
मेडिकेयर र मेडिगेप
जब तपाइँ turn 65 बर्षको हुनुहुन्छ, यदि तपाइँले पहिले नै सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त गरिरहनु भएको छैन भने, तपाइँ मेडिकेयरको लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। (केहि व्यक्तिको सट्टा रेल रेल अवकाश बोर्डमा आवेदन गर्नु पर्छ।) तपाईंसँग मेडिकेयर भित्रबाट चार भागहरू छनौट गर्न , थप वैकल्पिक पूरक स्वास्थ्य कभरेज मेडिगाप्स भनिन्छ यदि तपाईं मूल मेडिकेयरमा भर्ना हुनुभयो भने। यदि तपाईं वा तपाईंको जीवनसाथी अझै काम गर्दै हुनुहुन्छ वा जागिरबाट बिमा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले पार्ट्स बी वा डी लिन चाहनुहुन्न। परम्परागत रूपमा, मेडिकेयर पार्ट बीले लगभग %०% चिकित्सा लागतहरू समेट्छ, कोबी ब्लुमेनफेल्ड गान्ट्जका सह-संस्थापक भन्छन्। अध्याय , एक नि: शुल्क अनलाइन वेबसाइट जुन वरिष्ठलाई मेडिकेयर साइन-अप प्रक्रिया नेभिगेट गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंसँग मौलिक मेडिकेयर छ भने, बाँकी २०% सामान्यतया या त बाहिर जेबबाट भुक्तानी गरिन्छ वा मेडिगाप योजनाको साथ। यी चार भागहरू मेडिकेयर.gov ले दिन्छ।
मेडिकेयर भाग A: मेडिकेयरको यस अंशले अस्पताल बसाई, कुशल नर्सिंग हेरचाह, धर्मशाला हेरचाह, र सीमित घर स्वास्थ्य सेवा सेवाहरू जस्ता सेवाहरू समेट्छ। यदि तपाईंले काम गरेको बखत १० बर्षे मेडिकल करहरू तिर्नुभयो भने, तपाईंसँग यस योजनाको लागि प्रीमियम छैन। यदि तपाईंले गर्नुभएन भने, २०२१ मा यसको प्रतिमहिना 1 1११ सम्म खर्च हुन्छ। यदि तपाईंले मेडिकल करहरू तिर्नुभएन र कम आय गर्नुभयो भने, तपाईं राज्य सब्सिडी मार्फत प्रीमियम-रहित भाग A को लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ।
मेडिकेयर भाग बी: मेडिकेयरको यस अंशको साथ, तपाईं प्रीमियम, प्रतिलिपिहरू, र आउट-आउट-पकेट खर्चहरू तिर्नुहुनेछ। तपाईंको आय र कर दाखिल स्थितिमा निर्भर प्रीमियम लगभग $ १55 देखि about22२ सम्ममा लिन सक्छ। भाग बी योजना सामान्यतया मेडिकल रूपमा आवश्यक कभर गर्दछ - जस्तै एम्बुलेन्स सवारी र चिकित्सा उपकरण - र तपाईंको फ्लू शट जस्तै निवारक सेवाहरू।
मेडिकेयर भाग सी: मेडिकेयर पार्ट सी मेडीकेयर एडवांटेज योजनाहरु लाई सामिल गर्दछ। निजी कम्पनीहरूले यी योजनाहरू प्रस्ताव गर्न मेडिकेयरसँग सम्झौता गर्दछ, जसले सामान्यतया स्वास्थ्य र औषधि दुवै लाभ प्रदान गर्दछ। औसतमा, Stefanacci भन्छन्, यी प्रति माह $ 30 को लागत, तर लागत राज्य र योजना अनुसार फरक हुन्छ। मेडिकेयर लाभ योजनाहरूसँग, तपाईंसँग कटौती योग्यता र सिक्शोरन्स हुनेछ, त्यसैले तपाईं योजनाको नेटवर्क भित्र डाक्टरहरू प्रयोग गर्नु पर्छ। यदि तपाईं मेडिकेयर एडभ्यान्टेजमा नामांकन गर्न छनौट गर्नुहुन्छ भने, यो कसरी हुन्छ तपाईंले मूल मेडिकेयरको सट्टा तपाईंको A, B, र D सुविधाहरू।
मेडिकेयर भाग डी: मेडिकेयर भाग डी मेडिकेयरको एक अंश हो जुन केवल पर्चेको औषधिहरू सम्मिलित गर्दछ। यद्यपि पार्ट डी निजी योजनाहरु मार्फत प्रशासित छ। २०२० को लागि, आय समायोजनहरू लागू गर्नु अघि आधार प्रीमियम प्रति महिना $ .२.74 per छ, र कटौतीयोग्य र सिक्सेन्सरी पनि लागू हुन्छन् जुन लागू हुन्छ।
मेडिगेप: मेडिगापहरू निजी योजना हुन् जसले केही खर्चहरू भुक्तान गर्छन् जुन मौलिक मेडिकेयरले गर्दैन, जस्तै प्रतिलिपिहरू, सिक्युरन्स, र कटौतीयोग्यहरू। तपाईंसँग मेडिकेयर पार्ट्स ए र बी हुनु आवश्यक छ यदि तपाईं मेडिगाप योजना प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने।
सम्बन्धित: मेडिकेयर खुला नामांकन गाइड
समूह स्वास्थ्य सेवानिवृत्ति लाभ
केहि रोजगारदाताहरु प्रस्ताव गर्छन् समूह स्वास्थ्य योजना सेवानिवृत्त को लागी लाभ कम्पनी बाट यो मेडिकेयरको साथ संयोजनको रूपमा काम गर्दछ। जब तपाईं दुबैसँग हुनुहुन्छ, कुन प्राथमिक छ (पहिले बिल गरिएको), र कुन माध्यमिक हो धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। उनीहरू कसरी मेडिकेयर र तपाइँको उत्तम लागत-बचत विकल्पहरूसँग समन्वय गर्दछन् भनेर जान्नको लागि तपाईंको कर्मचारी एचआर विभागसँग जाँच गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
प्रारम्भिक अवकाशका लागि बजार बीमा
चाँडै रिटायर गर्दै? तपाईंले सम्भवतः बजार योजना बीमा योजना प्राप्त गर्नुपर्नेछ। Who२ मा सेवानिवृत्त व्यक्ति सामान्यतया मेडिकेयरको लागि योग्य हुँदैनन्, गान्ट्ज भन्छन्। दिमागमा राख्नुहोस्, जे होस्, त्यो बजार योजनाहरू उनीहरूको 60० को दशकमा उमेर-समायोजित छन् र धेरै महँगो हुनेछ। तपाईं एक जोडीको नियोक्ता-आधारित योजना मा प्राप्त गर्न कोशिस गर्न सक्नुहुन्छ, यदि यो सम्भव छ र यदि यो लागत प्रभावी छ
जब तपाईंको उमेर बढ्दै जान्छ र जेष्ठ नागरिकतामा परिवर्तन हुन थाल्छ, औषधी, नियमित हेरचाह र कुनै पनि बिरामी उपचारको कारण तपाईंको सम्भावित दीर्घकालीन देखभाल लागत बढ्न सक्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका स्वास्थ्य र मानव सेवा विभाग नोट गर्दछ औसत लागत एक नर्सिंग होम मा एक अर्ध निजी कोठा को लागी एक महिना, 6,844 छ। एक सहयोगी बस्ने सुविधा मा एक स्पट तपाईं प्रति महिना $ 3,628 चलाउनेछ। तपाईले यी लागतहरूलाई भुक्तान गर्न मद्दतको लागि दीर्घकालीन देखभाल बीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तर यो महँगो छ र सामान्यतया खरीद गरिएको छैन। जहाँसम्म, तपाई उमेरको रूपमा धेरै खर्चहरूको पूर्वदृश्य हुनुहुन्छ भने, तपाईं अवकाश स्वास्थ्य सेवाको योजना बनाउँदै गर्दा यसलाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
सम्बन्धित: अफोर्डेबल केयर एक्ट खुला नामांकनको बारेमा अधिक जान्नुहोस्
यदि तपाईंको पति या पत्नी अझै कार्यरत छ र तपाईं अझै मेडिकेयरको लागि योग्य हुनुहुन्न भने, तपाईं प्राप्त वा उनीहरूको स्वास्थ्य योजना मा रहन सक्नुहुन्छ। यो कम से कम महँगो विकल्प हुन सक्छ - तिनीहरूको कम्पनीको आकार, कभरेजको मात्रा, आदिमा निर्भर गर्दै। यसले तपाईंलाई स्विच गर्न सक्षम हुनु अघि मेडिकेयर पत्ता लगाउनको लागि समयको बफर प्रदान गर्दछ।
यदि तपाईं बजार कभरेज चाहनुहुन्न वा spousal कभरेज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भने, यसलाई कल गर्नु अघि तपाईंको रोजगारदाताको कोबरा कभरेज हेर्नुहोस् र हेर्नुहोस्। धेरै रोजगारदाताहरूले तपाईंलाई अनुमति दिनेछ तपाईंको कभरेज १ 18 महिनासम्म राख्नुहोस् , तर तपाईंले नियोक्ता शेयरको साथै तपाईंको आफ्नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
यदि सेवानिवृत्ति मा पैसा एक मुद्दा छ, मेडिकेडमा हेर्नुहोस् । मेडिकेड एक संयुक्त राज्य र संघीय सरकार बीमा कार्यक्रम हो जसले तपाईंलाई कभरेज दिन्छ यदि तपाईं कम आय भएको र कम सम्पत्ति छ भने। योग्यता मापदण्डको लागि आफ्नो राज्यको साथ जाँच गर्नुहोस्।
humalog र novolog एउटै कुरा हो
कुन बीमा प्रयोग गर्ने छनौट गर्नु भनेको एक अत्यधिक व्यक्तिगत प्रक्रिया हो, र तपाईंको सबै खर्च र तपाईं अवकाशमा हुन सक्ने अन्य आयको साथ होशियारीपूर्वक विचार गर्नुपर्छ। र दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाईंको उमेर बढ्दै जाँदा लागतहरू बढ्नेछ। Health 65 मा सेवानिवृत्त एक दम्पती जुन राम्रो स्वास्थ्यमा छ र औसत उमेरको बारेमा जीवन धेरै थोरै बाहिर जेब लागत हुनेछ। तर जब तपाईं एक वरिष्ठ नागरिक बन्नको रूपान्तरण गर्नुहुन्छ, यो राशि गगनचुम्बी हुन सक्छ यदि तपाईं धेरै औषधीहरूमा हुनुहुन्छ - र स्वास्थ्य बीमाबाट स्वतन्त्र छ, जो दीर्घकालीन देखभाल बीमा, सस्तो छैन।
म कसरी सेवानिवृत्ति स्वास्थ्य सेवा खर्च कम गर्न सक्छु?
तपाईं सेवानिवृत्त हुनुभएपछि स्वास्थ्य सेवाको लागि लागतहरू कम राख्नु भनेको पहिले नै निर्माण गरिएको राम्रो रकमको मात्र हो। तपाईं स्वस्थ रहन र नियमित रूपमा आफ्नो बीमा विकल्प समीक्षाको बारेमा सक्रिय हुन आवश्यक छ। यी सुझावहरूले तपाइँलाई सेवानिवृत्तिमा स्वास्थ्य सेवा लागतहरूको लागि तयार हुन र तयार रहन मद्दत गर्दछ।
HSA खोल्नुहोस् जब तपाईं अझै काम गरिरहनु भएको छ
तपाईंको भविष्यको स्वास्थ्य सेवाको योजना बनाउँदा धेरै संख्यामा भ्यारीएबलहरू आउँदछन्, यदि तपाईले बचत गर्न सुरू गरिसक्नुभएको छैन भने यो योजना गर्न स्पष्ट छ। स्टीलले स्वास्थ्य बचत खाता खोल्ने सल्लाह दिन्छ (HSA) जब तपाईं अझै आफ्नो कामका वर्षहरूमा हुनुहुन्छ। यो योजना सेवानिवृत्तिको समयमा चिकित्सा लागतहरूको लागि बचत गर्न एक उत्तम तरिका हुन सक्छ, किनकि यसले तपाईलाई अवकाशप्राप्तिमा प्रतिवर्ष हजारौं डलर योगदान गर्न अनुमति दिन्छ, वर्तमानमा कर पूर्व वातावरणमा, तपाईले पहिले नै बचत गरिरहनु भएको चीज बाहेक ।
एक वित्तीय सल्लाहकार संग काम
इमान्दार हुन, एक वित्तीय सल्लाहकार संग काम सामान्य सेवानिवृत्ति योजना सजिलो बनाउँछ। एक वित्तीय सल्लाहकार तपाईं आफ्नो वित्तीय र सेवानिवृत्ति बचत योजना मा एक इमानदार नजर लिन मद्दत गर्दछ, र तपाईं बैंक तोडे बिना स्वास्थ्य सेवा खर्च को लागी पैसा छुट्याउन तरिकाहरू पत्ता लगाउन सहयोग गर्न सक्छ।
स्वस्थ रहन कोसिस गर्नुहोस्
सेवानिवृत्ति मा स्वास्थ्य सेवा लागतहरु लाई कम गर्न को लागी सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका भनेको प्रयास गर्नु र स्वस्थ हुनु हो। Stefanacci आफ्नो जीवन को तीन अलग अलग पक्षहरु मा ध्यान केन्द्रित गर्न भन्छन्: दिमाग (समस्या समाधान द्वारा), शरीर (हिड्दै), र आत्मा (अरू संग संलग्न द्वारा)। उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ, खर्च जति कम प्रयोग गर्नुहुनेछ, उहाँ भन्नुहुन्छ।
सहि पीसीपी खोज्नुहोस्
एक राम्रो प्राथमिक हेरचाह चिकित्सक एक तपाइँसँग रहन सक्नुहुन्छ, जो तपाइँको लक्ष्य, आवश्यकताहरु र सरोकारहरु बुझ्दछ। तपाईं उनीहरूसँग जति नै काम गर्नुहुन्छ, त्यति नै उनीहरू तपाईंलाई व्यक्तिगतकृत हेरचाह दिन सक्षम हुनेछन् जुन तपाईं लामो समयको लागि पैसा बचाउनुहुनेछ।
रुघाखोकी लाग्दा कुन खानेकुरा खानुपर्छ?
एक चिकित्सा लाभ योजना विचार गर्नुहोस्
मेडिकेयर एडवांटेज योजनाहरू सीमित प्रदायक नेटवर्कहरू र अधिक प्रतिबन्धहरूको साथ आउँछ, तर तपाईं कहिलेकाँही कम लागत प्रस्ताव गर्नुहुन्छ। यदि पैसा प्रमुख चिन्ताको विषय हो र तपाईं तुलनात्मक रूपमा स्वस्थ हुनुहुन्छ भने, यो राम्रो विकल्प हुन सक्दछ।
कम आय अनुदानको फाइदा लिनुहोस्
मेडिकेयरले कम आय भएका उपभोक्ताहरूको लागि अनुदान प्रदान गर्दछ जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मेडिकेयर भाग डी को लागी जाँच गर्नुहोस् कि तपाई योग्य हुनुहुन्छ कि छैन अतिरिक्त मद्दत , एक प्रोग्रामले प्रति वर्ष लगभग $ 5,000 थपको साथ मद्दत गर्दछ पर्चेको लागत सीमित संसाधनको साथ मानिसका लागि। तपाईको लागि पनि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ चार अन्य मेडिकेयर बचत कार्यक्रम :
योग्य मेडिकेयर लाभार्थी कार्यक्रम: monthly १,०84; को व्यक्तिगत मासिक आय सीमा; भाग A र B प्रीमियमहरूको लागि भुक्तान गर्न मद्दत गर्दछ
निर्दिष्ट कम-आय मेडिकेयर लाभार्थी कार्यक्रम: monthly १, २6of को व्यक्तिगत मासिक आय सीमा; भाग बी प्रीमियमको लागि भुक्तान गर्न मद्दत गर्दछ
योग्य कार्यक्रम व्यक्तिगत कार्यक्रम: monthly १45456 को व्यक्तिगत मासिक आय सीमा; पार्ट अ कभरेज पनि हुनुपर्दछ; प्रत्येक वर्ष पुन: आवेदन गर्नुपर्दछ; भाग बी प्रीमियमको लागि भुक्तान गर्न मद्दत गर्दछ
योग्य अक्षम र कार्यशील व्यक्तिहरूको कार्यक्रम: 65 65 बर्ष भन्दा कम उमेरका काम गर्ने अपा person्ग व्यक्तिको हुनुपर्दछ जुन काममा फर्किए पछि भाग क कभरेज हरायो; तपाईंको राज्यबाट चिकित्सा सहायता लिनु हुँदैन; monthly 4,339 को व्यक्तिगत मासिक आय सीमा; भाग A प्रीमियमको लागि भुक्तान गर्न मद्दत गर्दछ
प्रत्येक वर्ष तपाईको स्थितिको पुन: आकलन गर्नुहोस्
यो महत्वपूर्ण छ। स्टेफानासीका अनुसार, धेरै व्यक्तिहरूले health 65 वर्ष उमेरका लागि आफ्नो स्वास्थ्य सेवा सेट अप गर्छन् र फेरि आफ्नो योजनालाई पुन: मुल्यांकन नगर्नुहोस्। बीमा कम्पनीहरूलाई त्यो थाँहा छ, र यसको लाभ लिन डराउँदैनन्। यो तपाईंको केबल बिल जस्तो छ, उनले भने। त्यहाँ फाइदाहरू छन् र तीनिहरूलाई साइन अप गर्न वास्तवमै आकर्षक बनाउँदछ। त्यसो भएपछि समयसँगै, योजनाले बिस्तारै-बाहिरबाट खल्तीमा खर्च गर्दछ र त्यसले फाइदा घटाउँछ। र कसैलाई पनि थाहा छैन यो के हुँदैछ। यदि तपाइँ तपाइँको योजना को लागी प्रत्येक साल विश्लेषण गरीन् कि यो अझै तपाई को लागी काम गर्छ भने, यो एक मुद्दा हुनेछैन।
तपाईं यस वार्षिक मूल्यांकन मेडिकेयर खुला नामांकनको हिस्साको रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ, जुन हरेक वर्ष अक्टुबर १ December देखि डिसेम्बर happens सम्म हुन्छ। Medicare.gov को योजना खोजकको प्रयोग गरेर, केहि परिवर्तन भएको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि तपाईंको हालको योजना समीक्षा गर्नुहोस्, प्रीमियममा विशेष ध्यान दिएर, बाहिर -पकेट लागत, सूत्रहरू, र कभरेजको साक्ष्य र परिवर्तन कागजातको वार्षिक सूचना। तपाईंले यसलाई उपलब्ध उपलब्ध अन्य योजनाहरूसँग तुलना गर्नुपर्नेछ र हेर्नुहोला कि यदि तपाईंको मेडिकल आवश्यकताहरू कसरी परिवर्तन भएको छ भन्ने आधारमा उत्तम फिट छ कि छैन।
प्रिस्क्रिप्शनहरूको लागि बचत कार्ड प्रयोग गर्नुहोस्
अब औषधोपचार लागत हजारौं मा तन्किन्छ के उपचार र व्यवस्थापन भइरहेको छ मा निर्भर गर्दछ, एकल पर्चा बचत कार्ड जस्तै SingleCare लागत कम गर्न को लागी एक सजिलो तरीका हो। तपाईं आफ्नो स्थानीय फार्मेसीमा एक को लागी कार्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, एक अनलाइनको लागि साइन अप गर्नुहोस्, वा हेर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंको चिकित्सा योजनाले एक प्रस्ताव गर्दछ कि। यद्यपि, एक बचत कार्ड बीमाको सट्टामा काम गर्दछ; यसको अर्थ तपाई कि त मेडिकेयर वा तपाईको बीमा लाभ वा एकलकेयर बचत प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ - दुबै होईन।
sertraline 50 mg कहिले सम्म काम गर्ने
रक्तचापको औषधि जसले खोकी लाग्दैन
chantix धूम्रपान बाहेक अन्य को लागी प्रयोग गरीन्छ?
स्वास्थ्य बीमा को लागी जेब खर्च को बाहिर के हो
वयस्कहरु को लागी कान संक्रमण को लागी घरेलु उपचार